''Puntland bacdu waa ka maamnuuc''
10 Feb 10, 2013 - 1:57:26 AM
Guddiga dabargoynta bacaha oo maanta 10 February,2013 ku shiray Garoowe ayaa ku dhawaaqay
inay mamnuuc tahay soo dejinta,haysashada,wax lagu qaato Bacaha ka dib markii la agaaday dhibaatada ay u gaysato caafimaadka dadka,Xoolaha iyo deegaanka waxaana joojinta bacaha ee deegaanada Puntland oo meelmariyey golaha Xukuumadda iyo Baarlamaanka dawladda Puntland.
Wasaaradaha iska kaashana dabar goynta Bacaha ayaa waxay kala yihiin wasaaradda deegaanka,Dekedaha,Maaliyadda,
hawada,Warfaafinta,Taliska Booliiska & hay'ado kele oo dawladda Puntland ka tirsan waxaana dhamaantood iska kaashanayaan inaan Bacaha Puntland laga soo dejin,lagu dhex iibin iyo in aan la isticmaalin.
Wasiiru dawlaha Maamulka wanaaga Puntland Maxamed Faarax Ciise Gashaan oo ka mid ah Guddiga dabargoynta ayaa Saxaafadda u soo gudbiyey ciqaabaha ay la kulmayaan qofka & meheradaha lagu arko bacaha,waxaana ganaaxyadu ay iskugu jiraan xariga & lacago ganaaxa,wuxuuna bulshada uu ku booriyey inay joojiyaan isticmaalka Bacaha oo dhibaatooyin caafimaad oo daran keena.
Wasiiru dawlaha Wasaaradda deegaanka Sulaymaan Maxamuud Siciid (Dhoodi) ayaa ka shekeyey dhibaatooyinka Bacuhu ku hayaan degaanka isida
dhirta & Xoolaha oo uu xusay inay u kuurgaleen dhanka dadka ayuu sheegay inay xanuunada ay keento ay ka mid yihiin Sonkorowga,Dhalmo La'aan,Kelyo xanuun & hamad la'aan,bulshadana wuxuu u jeediyey inay maanta wixii ka danbeeya inay joojiyaan Bacaha,oo sheegay inay is gafayn
Sarciga & qofka lagu arko oo lagu qaadayo.
Halkan ka dhageyso Warbixin Cabdiqani Irbad ka diyaarshay Bacaha